तेस्रो आँखा विशेष – Page 11 – Tesro Ankha
मादक पदार्थ नपाइने होटल
होटल पनि समावेशी ? सुन्दा अचम्म लाग्ला । सोलुखुम्बुको जुबु सुकेपोखरीमा समावेशी होटल सञ्चालनमा आएको झन्डै २० वर्ष हुन लागेको छ । रत्नमाया मगर, मेनुका बस्नेत र सुन्दरीमाया तामाङले होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । समावेशी होटल सञ्चालनमा आउनुअघि सुकेपोखरीमा चिया खाने पसलसम्म थिएन । होटल सञ्चालनमा ल्याउनुको उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्दै केरुङ–४ सोलुखुम्बुकी रत्नमाया मगरले सुनाइन्, ‘हामीले होटल सञ्चालन गर्नु...
दीपेन्द्र राई घर बनाउँदा हरियो रङकै छानो छाउनुपर्छ भन्ने छैन । तर, सोलुखुम्बुको खुम्जुङ र खुन्दे गाउँमा घरको छानो हरियो रङकै हुनुपर्छ । यो अनिवार्य सर्त हो । स्थानीयले यो सर्त पालना गर्नैपर्छ । र, गर्दै पनि आएका छन् । तसर्थ, खुम्जुङ र खुम्जुङसँगैका सीमावर्ती गाउँ खुन्देवासीका घरको छानो एकै रङका बन्न पुगे । खुम्जुङ र खुन्देमा डेढ सय घर धुरी रहेका छन् । डेढ सय घरका छानो एकै रङको बनेपछि गाउँको रूप ...
दीपेन्द्र राई हलेसी किरात, बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल मानिन्छ । हलेसी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सालिन्दा बढ्दै गएका छन् । यहाँ आइपुगेकालाई पद्मसम्भवले यहाँ दिव्य १२ वर्ष तपस्या गरेको कथा सुनाइन्छ । गुम्बा घुमाइन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीले हलेसीमा रहेको गुफालाई हिन्दुकरण गरी सुनाउने गरिन्छ । तर, किरातले के सुनाउने, के देखाउने ? हलेसी–६ कात्तिकेका सयन्द्र राईलाई पहिलेदेखि यही कुरा ...
दीपेन्द्र राई धेरै खेतबारी हुनेले बालीनाली लगाउन र उकेर्न (उठाउन) खेताला लगाउने परम्परा गाउँघरतिर हिजोआज पनि कायमैै छ । तर, जाँतो पिँध्नसमेत खेताला लगाउने परम्परा भने विरलै सुन्न पाइन्छ । सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीदेखि १९ कोष दूरीमा रहेको गुदेलस्थित चाचालुङमा जाँतो पिँध्न खेताला लगाउने गरिन्छ । कुटानी–पिसानीका लागि जाँतोमै भर पर्ने यहाँका स्थानीय परापूर्वकालदेखि जाँतो पिँध्न खेताला लगाउँदै आ...
इजरायलमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बस्नेत सद्भावना दूत नियुक्त
नेपाल पर्यटन बोर्डले इजरायलमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न साहित्यकार भगवती बस्नेतलाई पर्यटन तथा सांस्कृतिक सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ । ११ वर्षदेखि इजरायलमा रहेर नेपाली भाषा, कलासाहित्य र समाजसेवामा समर्पित रहँदै आउनुभएकी नवनियुक्त पर्यटन दूत साहित्यकार बस्नेतले इजरायलमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट टुरिजम एन्ड डेभलपमेन्टमा स्नातक गनर््भएको उहाँले इजरायलमा रह...
कोरियाबाट गोरखा भूकम्पको सम्झना